Fihaonana iray lehibe ny olona: dia izany amin-kitsimpo. Vato Nasondrotry Ny Fihaonana
Ny olona matotra dia, alohan’ny zavatra rehetra, ny marina: raha vao manomboka mampiaraka, dia tsy handeha hilalao amin’ny maro ny latabatra sy ny mbola hihaona hafa tokan-tena. Na dia samy manana ny famaritana ny fanitsakitsaham-bady, ny olona matotra no tsy resin’ny tamin’ny voalohany ny fakam-panahy.
Alina poker alakamisy, lalao baolina kitra ny asabotsy sy ny fotoam-panjonoana ny alahady dia tena tsara fa manana ny fialam-boly, fa olona matotra ianao koa dia tokony handray an-kaonty ao amin’ny fandaharana. Mety hanontany anao raha misy zavatra nomanina tao anatin’ny andro vitsivitsy manaraka ary ny famoahana ny fotoana ho anao hahita. Ny olona ho zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba fitantanana ny fahaleovantena: tsy misy intsony ny tanora sy mahafantatra ny fomba fitantanana ny olana amin’ny fiainana andavanandro. Izany no ela fa izy mahalala ny fitantanam-bola sy mahafantatra ny fomba fihetsiky ny vagaries ny fiainana. Ny radiatera ao amin’ny efitra fandraisam-bahiny, tsy misy asa intsony. Tsy misy olana dia mandray an-tanana ny olana ao cobbling miara-tenany na ny mangataka fanampiana avy amin’ny namana iray matihanina. Ny olona matotra dia legit: angataho ny bitro dia tsy amin’ny rehetra ny karazany avy, sy ny mahatonga anao ny laharam-pahamehana. Izy dia mihaino anao, te-hahita anao, ka mamaly haingana ny hafatra. Tandremo fa ny karazana lehilahy izay foana no manontany tamin’ny minitra farany raha toa izy ka afaka ny ho tonga any an-trano sy mandray ny telo andro, no mamaly ny hafatra tsotra. Ny olona matotra manaiky maha-ianao anao ianao, ny ankizy. Lasa ny efa-taona izany dia azo inoana fa ianao efa manana ny ankizy iray, na maromaro. Olona matotra dia tsy hatahotra ny hiditra ao ny fiainana. Mazava ho azy, izany dia zava-dehibe ny maka fotoana mandritra ity fivoriana ity, noho izany dia tena zava-dehibe eo amin’ny fiainana fianakaviana. Ny olona ho zava-dehibe te-hampiditra anao any amin’ny fiainany. Izy dia tsy matahotra ny hampahafantatra anao ny namany sy ny fianakaviany. Ao ny hazavana mandeha ny ankalamanjana amin’ny namana na andro alahady sakafo atoandro, izany no dingana manan-danja mandritra izay dia mikatsaka ny validation ny olona zava-dehibe eo imasony.
Ny lehibe ny olona mba hanaja anao
Mety ho toa hita miharihary fa izany dia zava-dehibe mba hahatsiaro ity fitsipika fototra. Tsy offusquera tsy raha te-haka ny fotoana mba ho tonga bebe kokoa»akaiky»na tsy hahatonga anao na oviana na oviana ny tanana mitsoka ny teoria toy ny adaladala, na ny ratsy kokoa, ny fandrahonana. Isika dia tsy ho marin-toetra: hihaona lehibe ny olona ao amin’ny tena fiainana efa sarotra, ka amin’ny aterineto izay tena mora ny mamorona ny fiainana iray hafa, dia bebe kokoa aza. Dia toy izany no ilaina mba ho mailo sy hitandrina mba mifidy ny mampiaraka toerana lehibe. Na izany aza, ireto misy soso-kevitra mba hahitana ny olona matotra momba ny mampiaraka toerana. Raha misy lehilahy ny fikarohana fivoriana lehibe, fa handeha haka ny fotoana mba hameno ny mombamomba azy mba tsy tsotra mandika sy mametaka feno fitsaratsaram-poana. Izy dia miresaka ny momba ny zavatra andrasana amin’ny fitiavana, ny firehetam-po, ny teniny dia toa tso-po. Ny mombamomba ny sary dia hisy tsy iray, fa maro, mba ho afaka hanolotra ny tenany ao amin’ny isan-karazany ny toe-javatra. Portrait, sary tongotra, sary fialan-tsasatra izy, tsy miafina ao ambadiky ny sivana na sehatra surjouées. Ny fotoana voalohany dia ny fanapahan-kevitra fotoana izao raha toa ka izy no tso-po, na tsia. Ny fifanakalozana tena tokony hijery toy ny fifanakalozan-kevitra. Izany hoe, izay miresaka momba azy, saingy koa manontany ny fanontaniana momba anao. Ny hevitra ny fomba fijery ary zava-niainana dia nifanakalo tsy misy fihetseham-po na inona na inona fanerena na ny fitsarana.
Amin’ny farany dia ny fanontaniana iray ny fitaka
Ao amin’ny tontolo virtoaly dia azo atao ny manana ny kabary ny tsara kokoa-nanorina izao tontolo izao, fa amin’ny zava-misy dia misy antsipirihany ny fihetsika fa tsy hamitaka. Raha misafidy mba hisoratra anarana amin’ny mampiaraka toerana mba mitady olona matotra, dia mety hanontany tena raha toa ka Sangany eo amin’ny Fiarahana dia ho anareo. Ny valiny dia tsotra: satria fantatsika fa manantena be dia be avy ny fihaonana, dia hanolotra anao ihany ny mombamomba izay tena mifanaraka mba hamela anao hahita haingana ny fahasambarana. Mba hanaovana izany, dia efa lasa ny algorithm ny siansa, mifototra amin’ny ny faritra vaovao, ny fikarohana safidy manokana sy ny toetra fitsapana tena tsipiriany. Ankoatra izany, dia hihaza ny tanana ny mombamomba matoatoa mba hanao soso-kevitra fa tokana ny frantsay izay te-hanorina-pitiavana. Amin’ny isaky ny dimy hatramin’ny fito vehivavy efatra amby telo ny lehilahy voasoratra, ary an’arivony ireo mpikambana vaovao isan-andro isika, dia afaka milaza ny toerana tojo ny tena mahomby indrindra fa misy. Raha te-hahafantatra ny hevitra avy amin’ny olona izay nampiasa vato nasondrotry ny Fihaonana, ary mahita izao ny tantara
← Amin'ny Teny Arabo Ny Vehivavy Fivoriana, Ny Shutterstock